AKAWAFUNI AMAXOKI UMQEQESHI WO-SUTHU - Ilanga News
Home Izindaba AKAWAFUNI AMAXOKI UMQEQESHI WO-SUTHU
ZISAVULEKILE izandla kumqeqeshi wamaZulu FC, uBrandon Truter ngomlolongi ozomsiza ukufeza izifiso zabanikazi bale kilabhu zokuyibona iqukula inkomishi ngesizini ezayo. USuthu lusanda kuhlukana nabaqeqeshi abebengamaphini kaBenni McCarthy, uMoeneeb “Slimkat” Josephs noVasili Manousakis. UMcCarthy wachithwa emuva kokuphuma koSuthu kwiCaf Champions League, kwabanjiswa uTruter, ogcine eqashwe ngokuphelele emuva kokusongwa kwesizini edlule. Phakathi kwamagama avelayo abaqeqeshi abangase basize uTruter, kukhona elikaMabhuti “Lion” Khenyeza oyibamba kwiLamontville Golden Arrows no-Ayanda “Cobra” Dlamini owayelolonga le kilabhu ithengwa nguSandile Zungu.
Ekhuluma neLANGA izolo ngoLwesithathu uTruter, uthe okwamanje akakabi naso isiqiniseko sokuthi uzosizwa ngubani. Nokho uthe cishe konke kuzokube sekucacile ngelizayo njengoba bezoqala ikhempu ngoMsombuluko. “Udaba lwamaphini lumqoka kakhulu ngoba kakumele ulande noma ngubani. Kufanele kube ngumuntu ongeke akuhambe ngemuva, ozokuba yiso lakho ngaso sonke isikhathi kubadlali. Kumqoka ukuthi kube ngumuntu ozokwazi ukusebenzisana nawe futhi ozokuba wusizo eqenjini,” kusho uTruter.
Mayelana nabadlali abasha abagawulwe yikilabhu, uthe kuyajabulisa kakhulu ukuthi abaphathi bakhombise ukuzimisela ngokumlandela abadlali abebafuna. Uthi lokhu kuzokwenza kube lula ukusebenza. “Silande uhlobo lwabadlali olusebenza ngokuzikhandla. Sifuna ukubeka ikilabhu endaweni enhle. Kangifuni ukwanda kakhulu kodwa ngiyabethemba laba badlali abathezwe yikilabhu, kuningi okuhle esizokwenzela uSuthu,” kusho uTruter. Uthi uyazi ukuthi abaningi kabazange bakholwe uSuthu luthola u-Ethan Brooks osuka kwiTS Galaxy, odlala ibhola elinenkosi phakathi esiswini. USuthu lusanda kuvuselela inkontileka kaButholezwe Ncube odabuka eZimbabwe, okuvela ukuthi usezamaubuzwe bakuleli. Le kilabhu izolibhekisa ePolokwane ukuyokwenza amalungiselelo okuqala kwesizini.
Previous article23 JUNE 2022
Next articleBasola isibhedlela ‘ngokubangcwabisa amathambo abangawazi’